COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रतिक्रियामा बेरोजगारी लाभहरू | VTLawHelp.org
नोट: यो जानकारी अप्रिल 17, 2020 सम्म ठीक थियो, यद्यपि केही जानकारी त्यसपछि परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ। कृपया कुनै पनि हालैका अद्यावधिकको लागि vtlawhelp.org मा हेर्नुहोस्।
तपाईंले COVID-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आफ्नो जागिर गुमाउनुभयो वा तपाईंको समय काटिएको थियो भने, तपाईंले सम्भवत: केही मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको रोजगारदाताले लाभहरूको लागि आवेदन नगर्न भनेपनि तपाईं सो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। रोजगारदाताहरूले बेरोजगारी लाभहरूको बारेमा निर्णयहरू गर्दैनन् — राज्यले गर्छ।
म COVID-19 संकटको अवधिमा बेरोजगारी लाभहरूको लागि योग्य छु?
निम्न अवस्था भएमा तपाईंले आवेदन गर्नुपर्छ:
तपाईंलाई जागिरबाट निकालिएको वा मुक्त गरिएको
तपाईंलाई केही दिनको लागि छुट्टि दिइएको
तपाईंको समय काटिएको
तपाईंलाई नियुक्त गरिएको तर COVID-19 को कारणले गर्दा सुरु गर्न नसकेको
तपाईंले COVID-19 को कारणले गर्दा विद्यालय वा बाल स्याहार केन्द्र बन्द भएको बच्चाको स्याहार गर्नुपरेकोले काम छोड्नुपरेको
तपाईंले COVID-19 को निदान गरिएको घरको सदस्यको लागि स्याहार गर्न काम छोड्नुपरेको
चिकित्सकको आदेशमा क्वारेन्टाइन बस्नुपरेको
तपाईंमा COVID-19 को निदान गरिएको वा लक्षणहरू देखिएको र निदानको आवश्यक भएको
घरमा बस्ने आदेशको कारणले गर्दा काम गर्न नसकेको
आफ्नो रोजगारदातालाई स्वास्थ्य कारणहरूका लागि टाढाबाट काम गर्न आग्रह गरेको र तपाईंको रोजगारदाताले "हुँदैन" भन्नुभएको
तपाईंको रोजगारदाताले सुरक्षा निर्देशनहरूको पालना नगरेको र तपाईंलाई COVID-19 लाग्ने अनुचित जोखिममा अनावरण गरेको हुनाले काम छोडेको
तपाईं क्वारेन्टाइन बसेको, बिमारी भएको, परिवारको सदस्य बिमारी भएको हुँदा स्याहार गरिरहेको वा बच्चाको स्याहार गरिरहेको कारणले काम गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले आफू Vermont द्वारा आर्जित बिमारी समय र संघीय COVID-19 भुक्तान बिदा को लागि योग्य छु वा छैन भनी हेर्नुपर्छ। बेरोजगारीको लागि आवेदन गर्नुअघि यो गर्नुहोस्। नयाँ संघीय भुक्तान बिदा कानून को बारेमा हाम्रो पृष्ठमा हेर्नुहोस्।
तपाईंको रोजगारदाताले "तपाईंलाई जागिरबाट निकालिएको छैन" वा "तपाईं थोरै दिनको छुट्टि दिइएको छैन" भन्नुहुन्छ भने यसले समस्या निम्त्याउँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। तपाईंले काम छोडेको कारणले गर्दा तपाईं बेरोजगागीको लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी राज्यले निर्णय गर्छ, तपाईंको रोजगारदाताले होइन।
म "गिग कर्मचारी" वा स्वतन्त्र ठेकेदार भएतापनि के म योग्य छु?
हो! तपाईं स्वयं-रोजगार, स्वतन्त्र ठेकेदार वा फ्रिल्यान्सर हो भने, तपाईंले माथि सूचीबद्ध गरिएका अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुभएमा तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
Vermont ले यस लाभको लागि अझैपनि नियमहरू र आवेदन प्रक्रिया सेट गर्दैछ। तिनीहरूलाई यो आवेदन तयार भएपछि तपाईंकहाँ कसरी पहुँच गर्ने भनी थाहा दिनका लागि श्रम विभागको वेबसाइटमा जानुहोस्।
नोट: तपाईंको सानो व्यवसायलाई "पेचेक संरक्षण" SBA ऋण वा आर्थिक चोटपटक प्रकोप ऋणको लागि लागू गरिएको छ? यो वित्त व्यवस्थाले तपाईंलाई नियमित समय कायम राख्न अनुमति दिन्छ? दिन्छ भने, तपाईं कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि हालतमा बेरोजगार हुन सक्नुहुन्न।
मैले यो वर्ष न्यूनतम कार्य इतिहासका आवश्यकताहरू पूरा नगरेमा के हुन्छ?
हो! तपाईंसँग महत्त्वपूर्ण कार्य इतिहास नभएतापनि यस समय अवधिमा तपाईंले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
म संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक नभएमा म योग्य हुन्छ?
सामान्यतया, तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक नभएमा, तपाईंसँग अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्न मान्य अधिकार छ र तपाईंले काम गर्दा अधिकार थियो भने तपाईं बेरोजगारी लाभहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय रोजगारी कानूनको परियोजनामा यस समय बेरोजगारी लाभहरूको लागि तपाईंको योग्यता बारे हामीलाई थाहा भएको र थाहा नभएको कुराको संक्षिप्त विवरण छ।
कागजातिकरण नभएका अप्रवासीहरूले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
तपाईं भर्मन्टमा बस्नुहुन्छ? तपाईंसँग संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्नको लागि तपाईंको आप्रवासी स्थिति वा अधिकार बारे प्रश्नहरू छन्? AALV वा दक्षिण रोयल्टन कानूनी क्लिनिक सम्पर्क गर्नुहोस्।
मैले हरेक हप्ता कति पैसा प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सक्छु?
विशेषगरी, राज्यले यो सूत्र प्रयोग गरेर आफ्नो साप्ताहिक लाभको रकम पत्ता लगाउन सक्छ। अधिकतम लाभ प्रति हप्ता $513 छ।
तपाईं COVID-19 को कारणले बेरोजगारीको लागि अहिले योग्य हुनुहुन्छ भने (उदाहरणको लागि, तपाईंसँग धेरै कार्य इतिहास नभएकोले वा तपाईं स्वतन्त्र ठेकेदार भएकोले), तपाईंको लाभ कसरी गणना गरिन्छ भन्ने कुराको लागि भर्मन्टले अझै नियमहरू लेखिरहेको छ। रकम प्रति हप्ता $191 (अन्तिम त्रैमासिकमा राज्य औसतको बेरोजगारी लाभहरूको आधा) र $191 बीचमा दायर गरिनेछ।
तपाईंले साप्ताहिक दावी दायर गरेमा तपाईंले हरेक हप्ता "महामारी बेरोजगारी क्षतिपूर्ति" को अतिरिक्त $600 प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो पैसा जुलाई 31, 2020 सम्म उपलब्ध छ। तपाईंले आंशिक बेरोजगारीको लाभ मात्र प्राप्त गर्नुभएतापनि यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले संकटको अवधिमा कहिलेसम्म बेरोजगार बीमा लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंले 39 हप्तासम्म वा डिसेम्बर 31, 2020 सम्म बेरोजगारी लाभगरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ -- पहिले नै आएको भएतापनि।
मैले यो वर्षको 26 हप्तासम्मको बेरोजगारी लाभ पहिले नै प्राप्त गरेको छु भने के हुन्छ?
तपाईंले अर्को दाबी दायर गर्नुभएको छ वा तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अर्को 13 हप्ताको विस्तारित बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि आवेदन दिन पुन: दायर गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
मैले कस्तो जानकारी लागू गर्नुपर्छ?
भर्मन्ट श्रम विभागको वेबसाइटमा यस पृष्ठको तल्लो भागमा भएको सूची हेर्नुहोस्। सक्दो जानकारीको साथमा तयार हुनुहोस्।
श्रम विभागको निर्णायकले निम्न भएमा तपाईं र/वा तपाईंको रोजगारदातालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ:
जानकारी छुटेमा, वा
तपाईं र तपाईंको रोजगारदाता यी कुनै पनि मुद्दाहरूको बारेमा असहमत भएमा।
निर्णायकलाई आवश्यक भएका जानकारी फेला पार्न उहाँलाई मद्दत गर्नको लागि सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंसँग यी कुनै पनि जानकारीको पहुँच छैन भने उनीहरूलाई भन्नुहोस्।
मैले कसरी आवेदन दिने?
भर्मन्टमा, बेरोजगारी क्षतिपूर्तिका लागि प्रारम्भिक दाबीहरू फोन वा अनलाइनद्वारा गर्नुपर्छ। 1-877-214-3330 वा 1-888-807-7072 मा फोन गर्नुहोस्। भर्मन्ट श्रम विभागमा अनलाइन फाराम छ। यहाँ फाराम पूरा गर्नुहोस्।
तपाईं स्वतन्त्र ठेकेदार, स्वयं-रोजगार वा "गिग" कर्मचारी भएमा, तपाईंले आफ्नो दावी निर्माण गर्नुअघि केही हप्ता लाग्न सक्छ। Vermont ले यस लाभको लागि अझैपनि नियमहरू र आवेदन प्रक्रिया सेट गर्दैछ। तिनीहरूलाई यो आवेदन तयार भएपछि तपाईंकहाँ कसरी पहुँच गर्ने भनी थाहा दिनका लागि श्रम विभागको वेबसाइटमा जानुहोस्।
दाबी गर्नका लागि तपाईंले श्रम विभागलाई सम्पर्क गर्नुअघि, तिनीहरूको आवश्यक जानकारीको सूची बाट जानकारी सङ्कलन गर्नुहोस्। श्रम विभागले धेरै फोन कलहरूलाई ह्याण्डल गरिरहेको छ जसकारण यसलाई फोनद्वारा प्राप्त गर्।न केही समय लाग्न सक्छ।
मैल; कति समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ?
यस समयमा, श्रम विभागलाई बेरोजगारी लाभहरूका लागि प्रतीक्षा गर्ने समय हुँदैन।
सामान्य समयमा, यसलाई सामान्यतया तपाईंको पहिलो भुक्तानी प्राप्त गर्न लगभग दुई हप्ता लाग्छ। महामारीका कारणले, तपाईंलाई लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईंले पहिलो भुक्तानी प्राप्त गर्दा यो वास्तविक रूपमा जान्न सम्भव छैन।
के म योग्य भएपछि मैले केही गर्नुपर्छ?
तपाईं काम गर्न सक्षम हुनुहुन्न वा तपाईंको समय काटिएको छ भनी प्रत्येक हप्ता आफ्नो दाबी दायर गरिराख्नुहोस्। तपाईंको अन्तिम नाम A-E बाट सुरु हुन्छ भने, सोमबार, F-L बाट सुरु हुन्छ भने मंगलबार, M-R बाट सुरु हुन्छ भने बुधबार र S-Z बाट सुरु हुन्छ भने शुक्रबार आफ्नो साप्ताहिक दाबी भर्नुहोस्।
श्रम विभागले नभन्दासम्म अन्यथा, तपाईंलाई कामका लागि खोजिदैँ छ भनी प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दैँन। श्रम विभागले कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा तिनीहरू वा अन्य व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा खतरा होस् भन्ने चाहन्न। तपाईंले रोजगार अन्तर्वार्ताहरू लिनुभयो, रोजगार मेलाहरूमा भाग लिनुभयो र यस्तै धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन् भनी देखाउन आवश्यक पर्दैँन।
यसले कसरी मेरा लाभहरू, हाउजिङ र स्वास्थ्य स्याहारलाई प्रभाव पार्नेछ?
तपाईंले 3SquaresVT, (खाद्य स्ट्याम्पहरू), इन्धन सहायता, सामान्य सहायता, पहुँच वा SSI जस्ता सार्वजनिक सहायता प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ती प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा बेरोजगारीबाट आफूले प्राप्त गरेको पैसा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सामान्यतया तपाईंले बेरोजगारी हुन सुरु भएको 10 दिनभित्रमा पैसाको रिपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईंले कति बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा आधारित भई, तपाईं बेरोजगारी हुँदा तपाईंका अन्य लाभहरू घटाइएको वा रोकिएको हुन सक्छ।
तपाईं अब उपरान्त बेरोजगारी लाभहरूका लागि योग्य नहुँदा तपाईंले यी प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा पनि रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जसकारण तपाईंले आफ्नो 3SquaresVT, इन्धन सहायता, सामान्य सहायता, पहुँच र SSI फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग अनुदानप्राप्त हाउजिङ छ भने, तपाईंले आफ्नो घरधनी (तपाईं अनुदान प्राप्त घरमा बस्नुहुन्छ भने) वा आफ्नो हाउजिङ अधिकार (तपाईंले खण्ड 8 भौचर जस्तो भाडा सहायता प्राप्त गर्नुभएको छ भने) मा तपाईंका बेरोजगारी लाभहरू रिपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईंले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गरेपछि तपाईंको भाडाको शेयर बढ्न सक्छ। तपाईंले आफ्ना बेरोजगारी लाभहरू रोकिदा पनि रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जसकारण तपाईंको भाडाको शेयर फेरि कम हुन्छ।
यो बेरोजगारी पैसामा ''महामारी बेरोजगारी क्षतिपूर्ति'' मा $600/हप्ता बाहेक मेडिकेडलाई पनि गणना गरिन्छ। तपाईंले भर्मन्ट मेडिकेडमा आफ्नो बेरोजगारी पैसाको रिपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ की अधिकांश मानिसहरू अतिरिक्त बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्न र उनीहरूका मेडिकेड राख्न सक्षम हुनुपर्छ। तपाईंले तपाईंको मेडिकेड परिवर्तन भइरहेको वा समाप्त भइरहेको छ भन्ने पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई स्वास्थ्य सेवा अधिवक्ताको कार्यालय (HCA) मा सम्पर्क गर्नुहोस्। स्वास्थ्य स्याहार अधिवक्तासँग कुरा गर्न वा हाम्रो मद्दत अनुरोध फाराम भर्न 1-800-917-7787 मा फोन गर्नुहोस्। HCA भरमन्ट वासीहरूका लागि नि शुल्क सेवा हो।
मेले अस्वीकार गरे भने के हुन्छ?
अपीलको लागि लिखित सूचनाको मितिदेखि तपाईंसँग 30 दिनको समय छ। तर केही अस्वीकारहरू अपील बिना समाधान गर्न सकिन्छ। प्रणालीमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले श्रम विभागले अहिले धेरै एप्लिकेसनहरूसँग सम्पर्कमा छ र उनीहरूमध्ये आधाले प्रारम्भिक अस्वीकारहरू प्राप्त गरिरहेका छन्। अपील गर्नुअघि, तपाईंले उनीहरूको दाबी समाधान गर्ने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी हेर्न तपाईंलाई नियुक्त गरिएको दिनमा तपाईंले श्रम विभागलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको अन्तिम नाम A-E बाट सुरु हुन्छ भने, सोमबार, F-L बाट सुरु हुन्छ भने मंगलबार, M-R बाट सुरु हुन्छ भने बुधबार र S-Z बाट सुरु हुन्छ भने शुक्रबार फोन गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई आफ्नो बेरोजगारी अस्वीकार अपील गर्न आवश्यक पर्छ वा पर्दैँन भनी निर्णय गर्नका लागि मद्दत गर्न सक्छौं। हाम्रो फाराम भर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई फेरि फोन गर्नेछौं। तपाईंको जानकारी कानूनी सेवा भर्मन्टमा जानेछ, जुन स्क्रिनहरूमा दुबै भर्मन्ट कानूनी सहायता र कानूनी सहायता भर्मन्टका लागि मद्दत अनुरोध गरिन्छ। तपाईंले हामीलाई 1-800-889-2047 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले अपील गर्नुपर्देन भने, तपाईंले अस्वीकार गरेको वा ''निर्धारण पत्र'' पठाएको मितिबाट 30 दिनभित्रमा श्रम विभागलाई पत्र मेल गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईं अपील गर्न चाहनुहुन्छ भनी उनीहरूलाई भन्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो अपील इमेल, फ्याक्सद्वारा पठाउन वा यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ तर यद्यपि यो पठाउनुभयो भने, अस्वीकार पत्र प्राप्त गरेको मिमिदेखि 30 दिनभित्रमा पठाउनुपर्छ। तपाईंको अपील पत्रमा के-के समावेश गर्ने भन्ने विवरणहरू का लागि श्रम विभागको वेबसाइट हेर्नुहोस्। आफ्नो पत्रको प्रतिलिपि राख्नुहोस्।
तपाईंले अपील फाराम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले UI वादी अपील फाराम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भर्नुहोस् र आफैँ प्रतिलिपि बचत गर्नुहोस्।
प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (ALJ) ले तपाईंको दाबी र अस्वीकारलाई समीक्षा गर्नेछ र तपाईंको फोन सुनुवाई हुनेछ। अपील प्रक्रियाका विवरणहरू को लागि तपाईंको सुनुवाई सूचनाको पछाडि वा श्रम विभाग वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
More in नेपाली / Nepali: Audio about COVID-19 financial help from CVOEO